OLEE OTú IBUDATA NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA MAKA LENOVO G555 - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Ụzọ nke ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka Lenovo G555
Nsogbu nke ọnwụ data dị ezigbo mkpa n'etiti ndị ọrụ. Enwere ike ihichapụ faịlụ ma ọ bụ na ebumnuche nke nje virus ma ọ bụ mmechi usoro.
Usoro mmeghachị aka - iji weghachite ihe ehichapụrụ site na mgbasa ozi dị iche iche (diski ike, draịvụl, kaadị ebe nchekwa). Na-arụ ọrụ na usoro faịlụ niile. Dị mfe iji. I nwere ike imata onwe gi na ihe omume a n'efu.
Ikike ịchọ ihe site na mgbasa ozi ọ bụla
Usoro ihe omume ahụ na-enye gị ohere ịchọta faịlụ furu efu na diski ike gị na mgbasa ozi ọ bụla. Nnọọ customizable. Iji malite, ị ga-ahọrọ ngalaba achọrọ ma gbaa ọsọ. Onye ọ bụla, ọbụna onye ọrụ na-enweghị uche, ga-eme nke a.
A gosiputara nsonaazụ maka nchekwa niile dị na ngalaba ahụ, ma ehichapụ faịlụ ndị akara na crosses.
Ihe dị n'ime folda ahụ nwere ike ịlele na windo ọzọ ma họrọ ihe achọrọ. A ga-eweghachi faịlụ ndị ahọrọ na ntọala ndabara ma ọ bụrụ na ndị ọzọ edobeghị.
Nhọrọ ndị ọzọ maka mgbake
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, usoro ihe omume ahụ nwere ike ịhazi ndokwa ọzọ maka mgbake. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịtọzi iji weghachite usoro ADS, mgbe ahụ na mgbakwunye na faịlụ ahụ, a ga-eweghachite ozi ndị ọzọ. Ma ọ bụ weghachite usoro nhazi nchekwa. Iji weghachite faịlụ ederede na foto zuru oke ntọala.
Na nsụgharị free ị nwere ike iweghachite 1 faịlụ kwa ụbọchị. Iji wepụ mmachi ahụ, ị ​​ga-azụta ngwugwu akwụ ụgwọ.
Ọbụna na mmemme nchịkwa Aka, ọ ga-ekwe omume iweghachị mkparịta ụka, ya bụ, NTFS data data nke ejikọrọ na faịlụ ehichapụ.
Site na ọrụ a, ị nwere ike ịlele ihe niile ehichapụrụ ma weghachite ha ma họrọ.
Mgbe ị na - arụ ọrụ na nnukwu data, ọ na - eme na achọtalarị faịlụ achọrọ, ihe nyocha ahụ na - aga n'ihu. Iji chekwaa oge, ọ ga-ekwe omume ịkwụsị usoro ahụ site na iji bọtịnụ pụrụ iche.
Ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ maara aha faịlụ ahụ furu efu, ịnwere ike iji ọrụ ọchụchọ ahụ, nke ga-echekwa oge.
Iji ntinye a wuru n'ime ya, a na-ahazi ihe ndị a chọtara site na isiokwu. N'ebe a ị nwere ike igosi naanị faịlụ ma ọ bụ nchekwa na ọdịnaya.
Akụkụ a na-enye gị ohere ịlele ọdịnaya nke faịlụ ehichapụ. A na-egosipụta ozi na ala nke windo ahụ.
Usoro ihe omume a gụnyere ndepụta aka. N'ebe a, ị nwere ike ịchọta azịza maka ajụjụ gị niile ma mara onwe gị na njirimara nile nke Akaghachị Aka.
Ikike ịlele njirimara kọmputa
Site na nchịkọta Akaghachị Aka, ndị ọrụ ga-enwe ike imata onwe ha na njirimara nke ngalaba ahụ. Ị nwere ike ịlele ozi gbasara ogo nke disk, ụyọkọ, mpaghara, yana ụdị usoro faịlụ.
Site na faịlụ ahọpụtara na usoro ihe omume ahụ, ị ​​nwere ike ịmepụta ihe oyiyi ma nweta ozi site na mpaghara.
Mgbe m mere nyochaa usoro ihe omume ahụ, enwere m ike ịkọwa uru karịa ụkọ. Iweghachị aka na-adị mfe iji ma onye ọ bụla nwere ike ịrụ ọrụ na ya.
Uru nke usoro ihe omume ahụ
Njikọ nke dị nro;
Ọnụnọ oge ikpe;
Enweghị mgbasa ozi.
Mgbochi na ọnụ ọgụgụ nke faịlụ iji weghachi na mbipute n'efu.
Ibudata Iweghachị aka maka n'efu
Iweghachi ihe nchọgharị akụkọ ihe mere eme site na iji Iweghachite Aka Nlekọta nyocha nke PC SoftPerfect File Iweghachite Ndabere nchekwa Windows
Iweghachị aka - mmemme iji weghachite faịlụ sitere na diski ike nke mebiri emebi, ehichapụ na mberede ma ọ bụ furu efu n'ihi nkwụsị.
Onye Mmepụta: SoftLogica
Ọnụ: $ 15